China Truck Side Mirror PK9822 Mugadziri uye Mutengesi | West Bridge
Kugamuchirwa kuchitoro chedu chepamhepo!
Rori divi girazi PK9470
Kurutivi Mirror yeRori PK9583
Rori Kurutivi Wakatarisa Mirror PK9780
Rori Kurutivi Mirror PK9883
Rori Kurutivi Mirror PK9849
Rori Kurutivi Mirror PK9823
Rori Kurutivi Mirror PK9822
Rori Kurutivi Mirror PK9810
Rori Kurutivi Mirror PK9592
Rori Kurutivi Mirror PK9590
Yakakwira Hunhu PK9822 igirori regirazi reNew Hino & Volvo F110 dzakateedzana.Tinoita zvigadzirwa zvese zvakanaka uye zvinogara kwenguva refu kune edu vatengi.Meet kana kupfuura OE maratidziro muchimiro, kukwana uye basa. Isu tine zvitupa zveEC uye ISO9001: 2008 yekuona mhando yezvigadzirwa zvedu.
* Chigadzirwa Tsananguro
Yakakwira Hunhu PK9822 igirori regirazi reNew Hino & Volvo F110 dzakateedzana.Tinoita zvigadzirwa zvese zvakanaka uye zvinogara kwenguva refu kune edu vatengi.Meet kana kupfuura OE maratidziro muchimiro, kukwana uye basa. Isu tine zvitupa zveEC uye ISO9001: 2008 yekuona mhando yezvigadzirwa zvedu.Sezvo mutemo uyu, vatengi vazhinji vanova vatengi vedu vakavimbika muzvizvarwa.Kutendeseka nekutendeseka ndiwo musimboti uye musimboti kukosha kwebhizinesi redu. isu tinogutsa vatengi vedu nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvetsika masevhisi, dhizaini dhizaini uye nzira dzekutengesa.Tinozvipira kupa vatengi neyakanaka mhando zvigadzirwa, uye zvinoenderana nemutengi wevatengi anoda kuti ape inonzwisisika kwazvo rori yekumashure girazi. Tine magirazi ese aunoda.Tinokukoka kuti ubatanidze mhuri yedu. Kambani yedu vashandi vese vakapfeka "kuvimbika, kushingairira, pragmatic, nyanzvi uye inoshanda" bhizinesi uzivi kuratidza zvigadzirwa zvepamusoro-soro. Makambani kuti anzwisise nekusangana nezvinodiwa nevatengi kuti vararame panheyo, uye anogara achisimbisa vashandi ruzivo rwevashandi uye ruzivo rwehunhu hwechigadzirwa, uye vanoedza kukupa iwe masevhisi emhando yepamusoro. Mune ino inogamuchirwa noushamwari mudzimba uye vekunze vatengesi tsamba inodaidzira kutaurirana, tarisira mberi kushanda newe unofara kubatana
PK HERE PK9822
KUSHANDISA Nyowani Hino & Volvo F110 akateedzana
* Nei Tisarudze
* Kuburikidza nesu, unogona kuwana ese marori ekuparadzanisa mativi aunoda
* Isu tinotakura maoda ese panguva chaiyo.
* Isu tinotengesa zvikamu zvedu pasirese.
* Ose maodha akarongedzwa akachena uye nokungwarira
* Yemhando Zvikamu neProfessional Service paMakwikwi Mitengo
* SWB nyanzvi mune Rori & Bhazi munda uye mhando yakavakirwa.
* Tichakupindura iwe kubvunza kwako mumaawa makumi maviri nemana.
* Tinoremekedza mutengi wese seshamwari yedu uye nemwoyo wese tinoita bhizinesi uye tinoita hushamwari navo, zvisinei nekwavanobva.
* Hunhu hwekutanga, mukurumbira mukurusa, basa remhando yepamusoro uye, vatengi vanogutsikana
* Mabasa edu
Chinangwa chedu chekutanga kugutsa zvinodiwa nevatengi uye nekuvapa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamutengo unokwikwidza kwazvo.
Nezve izvo zvigadzirwa zvedu zvinogara zvakagadzirwa zvinoenderana neyakajairwa nyika dzepasi rose kuremekedza iwo mamiriro ehunhu asi zvakare ichigadzirisa zvinhu uye necheni yekutengesa.
Mushure mekutumira, isu tinoteedzera izvo zvigadzirwa zvako iwe kamwe pamazuva maviri, kusvikira iwe wawana izvo zvigadzirwa. Kana wawana zvinhu, zviedze, uye undipe mhinduro Kana iwe uine chero mibvunzo nezvedambudziko iri, taura nesu, isu tinopa iyo yekugadzirisa nzira yako.
* Kavha uye Kutakura
Yedu nyanzvi yehunyanzvi kurongedza.Enerally, bubble bhegi kutanga, pasuru nekatoni. tinorongedza zvinhu zvedu mumabhokisi machena asina kwayakarerekera uye makatuni e brown. Kana iwe wakanyoreswa zviri pamutemo patent, tinogona kurongedza zvinhu mumabhokisi ako akapiswa mushure mekuwana tsamba dzako dzemvumo.
Kutakurwa kwemarori makuru kuenda kuchiteshi chengarava
Kubatana kwekufambisa kwepasi rese
Nenhamba, senge DHL, UPS, FEDEX nezvimwewo isuo pasuo, kazhinji 3-7 mazuva ekushanda kuti asvike.
Nemhepo kuenda kuchiteshi chemhepo, kazhinji 7-12work mazuva kuti asvike.
Negungwa kugungwa chiteshi, kazhinji 25-40work mazuva kuti asvike.
Pashure: Rori Kurutivi Mirror PK9810
Zvadaro: Rori Kurutivi Mirror PK9823
Rori Kurutivi Mirror PK9468
Rori Side Mirror PK9506
Rori Kurutivi Mirror PK94PK9482
Nyorera tsamba yedu kuti ugare up-to-date nezvatinosimudzira, mitengo, kutengesa, uye zvipo zvakakosha
Wedzera: 10F, Wanjia Plaza, Jingao Rd 377, Shanghai, PRC